Shakespeare's Globe | Safarka Absolut
Riwaayadaha ku saabsan Shakespeare's Globe
Shakespeare's Globe waa mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay in lagu raaxeysto sida ugu fiican ee noocyada kala duwan ku ciyaara magaalada London, dalxiis uusan qofna rabin inuu ku seego muhiimadda dhismaha dartiis, iyo sidoo kale mid kasta oo ka mid ah shakhsiyaadka halkan lagu sameeyay.
Cidii booqatay Buufin Shakespeare hubaal waxaad wax ka ogaan doontaa taariikhdeeda, adoo xusaya in goobtan la abuuray qarnigii 1997-aad si badiyaa loo turjumo dhammaan shaqooyinka Shakespeare iska leh, iyagoo masrax caan ku ahaa bilowgiisii. In kasta oo uu muddo dheer xidhnaa, haddana XNUMX ayaa albaabada loo furay, mar labaadna waxay noqotay wax lagu farxo dhammaan deggeneyaasha iyo martida dibedda ka timid. Waxaa jira kuwa tixgelinaya in dib-u-qaabeynta cusub aysan suurtagal ahayn in la ilaaliyo khadadka asalka ah ee tiyaatarka lahaa, laakiin ay tahay qaabka wajigiisa hore.
Ogaanshaha Shakespeare's Globe
Dhib malahan haddii ay ku jiraan Buufin Shakespeare la sameeyo fasiraad ruwaayad, ama haddii muddo gaaban ay sii ahaato madhan, ujeedku waa in had iyo jeer ay mudan tahay in la booqdo. Naqshadeynta waxay soo jeedineysaa saqaf ilaalin ah, waana sababta waqtiyadii hore, iyo xitaa maanta, in badan oo ka mid ah riwaayadaha masraxa aan lagu qaban karin xilliga qaboobaha.
Hadaad rabto inaad tan la kulanto Buufin ShakespeareMarka waa inaad tagtaa inta badan xilliga xagaaga, wax noqon kara inta u dhexeysa Abriil iyo Oktoobar. Taariikhda tan Buufin Shakespeare waa inuu markhaati ka noqdaa qaar ka mid ah burburka qayb ka mid ah uu sababo dabka, ka saarida, xiritaanka English Puritans iyo dhowr dib u dhiska goobta. Waxay ku taal meel aad ugu dhow Tate Modern iyo xarunta tareenka dhulka hoostiisa mara ee Mansion House, waxaad u tagi kartaa inaad ku raaxeysato qaar ka mid ah riwaayaddooda iyagoo bixinaya qiimo u dhexeeya 15 illaa 40 euro, dhammaantood waxay kuxiran yihiin jadwalka, nooca shaqada iyo goobta kursiga aad keydsaneyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Riwaayadaha ku saabsan Shakespeare's Globe